डायरी Archives - Kavyalaya - काव्यालय
५ कार्तिक २०७७0comment
दौडिन्छु, बस् दौडिन्छु ! – नदीश नदीश (अनुभूति,यात्रा )
by nadeeshnadeesh १ कार्तिक २०७७
ओ नदीश! तँ मुला अल्छी, यहीँ बस् थेचारिएर। म त जान्छु, दौडन्छु। म झुत्ती खेल्छु हावासँग, तँ निलेर बस् आफ्नै श्वासको दुर्गन्ध। मानसमा दिनभर थुप्रिएको धुलो छ। एउटा अर्को दिनले…
by सुमन बुढाथोकी २७ भदौ २०७७
भन्नैपर्ने खास कुरा छैन। तर मन शान्त छैन। त्यसोभए भन्ने कुरा छन्? पर्याप्त छन्। असरल्ल छन्। आफ्ना कुरा अरुलाई भन्न डर लाग्छ। कसैको लय बिथोल्ने मलाई के अधिकार? आफ्नो जीवनको…
बोन्साई मान्छे केही समय यता बोन्साई मान्छेलाई मैले कतै देख्न सकिनँ । बोन्साई अर्थात् मालीले काँटछाँट र स्वभाविक हुर्काइ संकुचन गरी तयार पारेको सानो वनस्पतिको पोथ्रा ! कहाँ गयो होला…
दाग : एउटा कोणबाट जिन्दगी
by sriju १२ पुस २०७६
टेबलमा छरिएका किताब र बेडमा लास्ट बेन्चर स्टुडेन्ट जस्तै आवारा लेटिरहेको ब्ल्यांकेट तिर इशारा गर्दै ममी आफ्नो मस्ट पपुलर डायलग बोल्नुहुन्छ प्रत्येक पटक मेरो रुम छिर्दा – “हेर कोठाको बिजोग…